Manchester United Oo War Farxadle Ka Heshay Neymar Jr, Kaddib Dhawaaq Kasoo Yeedhay | Laacib.net
07-12-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Manchester United Oo War Farxadle Ka Heshay Neymar Jr, Kaddib Dhawaaq Kasoo Yeedhay
Xiddiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Neymar ayaa yididiilo geliyey kooxda dhibaataysan ee Manchester United, taas oo hore ugu fashilantay inay gacanta ku dhigto.
Neymar ayaa la sheegay inuu xog ka raadsaday ciyaartooyo ku sugan Ingiriiska oo uu wax ka weydiiyey sida horyaalkaasi u shaqeeyo, xili ay soo baxayaan warar sheegaya in PSG ay ku qasbanaan doonto inay iibiso qaar ka mid ah xiddigaheeda lacagta badan ay kusoo iibsatay sababo la xidhiidha baadhitaanka ay ku hayso UEFA ee jebinta sharciga dhaqaale wanaagga.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain, Manchester United ayaa heegan gashay markii uu Neymar sheegay in xilli ay noqotaba uu ka ciyaari doono Premier League, laakiin waxa iyaduna tartanka soo gashay Manchester City oo aan jeclayn inay aragto United oo awood yeelatay.
26 jirkan oo ka hadlayey bartiisa Yourtube-ka ayaa waxay sheeko toos ah dhex martay difaaca reer France ee Mendy oo xilligan dhaawac kaga maqan Man City.
Mendy ayaa weydiiyey Neymar su’aal ahayd: “Neymar Jnr, iigu jawaab luuqadda Faransiiska. Ma kula tahay in aad maalin ka ciyaari doonto Premier League?”
Neymar kuma raagin jawaabta su’aashan, waxaanu yidhi: “Ma garan karro waxa berri hdhici doona laakiin waxa aan aaminsanahay in ciyaartoy kasta oo wanaagsan, ugu yaraan uu hal maalin ka ciyaari doono Premier League.
“Haddii aad halkaas ka ciyaarayso, waxa aan kuu rajaynayaa inaad farxad ku joogto Premier League, sababtoo ah halka ugu wanaagsan oo kaliya ayaad u qalantaa.
“Waa tartan weyn, kana mid ah kuwa ugu wanaagsan dunida.”
Hadalkan kaddib ayaa uu Don Balon sheegay in United ay dhegta taagtay oo ay wakiilladeeda ku wargelinayso inay fiiriyaan suurtogalnimada ay kusoo xero gelin karayaan Neymar Jr.